यस्ता छन् थाहा पाउनुहोस् लामो आयु बाँच्नका लागि अपनाउनैपर्ने तरिकाहरु
डिसेम्बर 18, 2018 साइन्स इन्फोटेक	6 Comments आयु, लामो आयु
लामो आयु बाँच्नका लागि अपनाउनैपर्ने तरिकाहरु ! राम्रो स्वास्थ्य र लामो उमेरका लागि सन्तुलित आहार र पर्याप्त व्यायाम अत्यन्तै जरुरी छ । खानपानमा गडबडी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी लापरबाहीका कारण मानिसको उमेर घट्छ, साथै शरीर पनि कमजोर बन्छ । खानपानका साथै अन्य केही यस्ता कुरा छन्, जसले तपाईंको स्वास्थ्य बिगार्ने मात्रै नभएर आयु घटाईरहेको हुन्छ । लामो आयु बाँच्नका लागि अपनाउनैपर्ने २५ तरिकाहरु यस प्रकार छन् :
यो अनौठो लाग्न सक्छ तर विहान पालैपालो एक खुट्टामा एकैछिन उभिनाले तपाईको शरीरलाई सन्तुलनमा राख्ने मात्रै नभई तपाईको मेरुदण्डलाई सहयोग गर्ने ढाड, पेट र पेल्भिक मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ ।
वेल्समा गरिएको एक अध्ययन अनुसार महिनामा हप्तामा दुईपटक भन्दा धेरै सेक्स गर्ने मानिस भन्दा महिनामा एकपटक भन्दा कम सेक्स गर्ने मानिसको छिटो मृत्यु हुने जोखिम बढी हुन्छ । स्वस्थ सेक्स लाइफ भएका जोडीहरुलाई सात वर्ष कम उमेरको देख्न सकिन्छ किनभने सेक्सले तनावमुक्त बनाउँछ र निन्द्रा राम्रो हुन्छ ।
ओखर सबैभन्दा स्वस्थबर्धक हो किनभने त्यसमा रोग प्रतिरोधी र बुढ्यौली नलाग्ने एन्टी अक्सिडेन्टहरु पाइन्छ । दैनिक तीन ओखर खाएमा तपाईलाई धेरै फाइदा गर्छ ।
सूर्यको प्रकाशबाट पाइने भिटामिन डीले तपाईलाई मुटुको रोग, ओस्टियो पोरोसिस र क्यान्सरको रोगबाट बचाउँछ । त्यसैले तपाईको भिटामिन डि लेभललाई छालाको क्यान्सरको जोखिम नभईकन बढाउन दिनमा केही मिनेट सनस्कि्रन कि्रम नलगाइकन हिड्ने गर्नुहोस् । तर तपाई यो कुरामा निश्चित हुनुहोस कि तपाई घामले डढ्नुभएको छैन ।
एक अध्ययनका अनुसार अनिन्द्राको कारणले तपाईलाई डिप्रेशन र मुटुको रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्याको जोखिम बढाउँछ । र, सानो परिवर्तनले यसमा धेरै फरक पार्छ । हावार्ड बिजनेस स्कूलले गरेको अध्ययन अनुसार सात घन्टा वा त्यसभन्दा कमी सुत्ने मानिसमा ब्लड प्रेसरको समस्या हुने पाइएको छ जसले हर्टअट्याक र स्ट्रोकको समस्या हुन सक्छ ।
अमेरिकी नेशनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटका अनुसार २५ वर्षको उमेरमा तपाईले एक घन्टा टिभी हेर्नुभयो भने आफ्नो आयुको २० मिनेट कम गर्नुहुन्छ । तपाईले जति धेरै समय बसेर टिभी हेर्नुहुन्छ तपाईको शरीरका मांसपेशीहरुको कसरत हुँदैन र क्यालोरी बर्न हुँदैन । जसले तपाईलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ र आयु छोट्याउन सक्छ ।
वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएअनुसार तपाईले तौल जोख्नेभन्दा पनि आफ्नो कम्मरको नाप लिनुभयो भने स्वास्थको स्थिती थाहा पाउन सक्नुहुन्छ किनभने यसले शरीरको महत्वपूर्ण अंगको वरिपरि जम्मा भएको बोसो पत्ता लगाउँछ । पुरुषको कम्मर ९४ सेन्टी मिटर र महिला कम्मर ८० सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनुपर्छ ।
हजार भन्दा धेरै अध्ययनहरुका अनुसार विश्वास र लामो आयु बाँच्नुमा सम्बन्ध हुन्छ । केहि कुरामा विश्वास गर्नाले मानिसहरु तनाव र भावनात्मक समस्याहरुसँग लड्न सक्छन । त्यस्तै उनीहरुमा मुटुरोग, स्वाशप्रस्वाश र पाचन समस्याको जोखिम कम हुन्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
← शत्रुले पनि केही गर्न सक्दैनन् हातमा यस्तो रेखा हुने मानिसलाई
लामो आयु बाँच्नका लागि सधै रहनुस् यी चार कुराबाट टाढा →
नोभेम्बर 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
डिसेम्बर 7, 2019 डिसेम्बर 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
6 thoughts on “लामो आयु बाँच्नका लागि अपनाउनैपर्ने तरिकाहरु”
Pingback:थाहा पाउनुहोस् लामो आयु बाँच्नका लागि सधै रहनुस् यी चार कुराबाट टाढा
Pingback:शास्त्र भन्छ - जान्नुहोस् ! यी ५ कारणहरुले घट्छ मानिसको आयु
Pingback:लामो आयु बाँच्न के गर्नुपर्ला ?